I-Men's Wallet Long Wallet Yabesilisa Yentsha Yamafashini I-Classic Buckle Multi-Card Position 3 Fold Litchi Pattern Soft Leather Wallet Card Case
Yenziwe ngesikhumba sekhwalithi ephezulu kakhulu futhi enobungani bemvelo ye-PU. Iphethini le-litchi ebucayi ithambile, ingaphefumula, izizwa kahle, futhi ingahlanzwa ngendwangu emanzi.
I-Magnetic wallet emfishane yesikhwama samadoda esifushane nendawo evulekile
Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ze-PU, ukwakheka kwamanani amakhulu, ungafaka izithombe, amakhadi asebhange, ama-banknotes, ama-banknotes, ushintsho olungajwayelekile, njll. Igridi emnyama ye-zipper ebekiwe ingabeka amasheke abalulekile, njll., Iphephile futhi ithembekile.
Isikhwama esisha senkokhiso yamadoda esijwayelekile se-USB esijwayelekile
Isikhwama se-nylon esezingeni eliphakeme nesimfashini esiphakeme, indwangu yendwangu ye-nylon inezimpawu zokuphindaphindeka kwamanzi, ukumelana nokuqhekeka nokuphikiswa kwezinyembezi.
Isikhwama esisha sendlebe esiyi-anti-theft shaft ephathekayo sha ephathekayo
Izindwangu ezisezingeni eliphakeme ezisezingeni eliphezulu futhi ezinemvelo ezungeza imvelo, okufakazelwa amanzi, kungavikeleki futhi kungavikeleki izinyembezi. Kuklanywe ngesikhwama esikhulu samandla amakhulu nezikhwama eziningi ezisebenzayo.
Imithwalo yezandla, isikhwama sokuhamba amabanga amafushane, isikhwama sokuthwala umzimba
Umhlaba awuyena owokubona, kepha owokuhamba. Isikhwama sokuhamba esinemfashini nesimfashini senziwa ngendwangu ekhethiwe engenasici ephakeme engenasisekelo, engahambelani, nobunzima obukhulu ,phefumula futhi ntofontofo. Idizayini enobukhulu obukhulu ingagcina inani elikhulu lezinto ezinjengokugqoka komuntu siqu, amakhompyutha, omakhalekhukhwini, izambulela, njll., Kanye nesikhwama se-zipper sangaphambili kungagcina izingcingo zamakhompiyutha, amakhompyutha we-tablet, amaketanga okhiye nezinye izinto ukuze zisetshenziswe kalula kunoma yikuphi isikhathi.
Isikhwama sezimonyo senziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ze-PU matte, ezikhululekile ukuthinta futhi zibe nemiphumela yokungavunyelwa ngamanzi nokugqokwa kokugqokwa. Isimo esiyindilinga, imibala ehlukile yokuqhathanisa, imibala emibalabala, izimonyo zansuku zonke, izindebe zomlomo, imikhiqizo yokunakekela isikhumba namabhulashi noma ezinye izinto ezincane ezidingekayo lapho usohambweni. Ilungele ukubeka izimonyo nezinto zokugcina.
Umklamo ohlukile owenzelwe umuntu, usebenzisa izinto ezisezingeni eliphezulu futhi ezinemvelo ezinobungqabavu bePU, ukukhethwa kwangaphakathi kwe-velvet enhle nethambile, ukuphela okuphezulu, ukuvezwa kwesimo esihle. Kunezindawo eziningi ngaphakathi, ezilungele ukugcina amasongo, imigexo, imilebe, namasongo, amawashi, njll, okukuvumela ukuba uhlunge futhi ugcine izinto.
Isikhwama selaptop esikhwameni samadoda nabesifazane sebhizinisi
Izinto ezisezingeni eliphakeme: Ingaphandle lalesi sikhwama se-laptop lenziwa nge-Oxford fiber engangeni manzi kakhulu, kanti ingaphakathi lenziwe ngendwangu ethambile ye-velvet cushion.
Ukuthengiswa kwempahla eshisayo engagudluki eyenzelwe isiphambano se-PU isikhwama samadoda esikeji saseBrithani semoto yangaphandle yokuphumula yangaphandle
Ngomdwebo oguquguqukayo, leli bhulukana le-laptop linendawo enkulu ebanzi engalalisa ama-laptops ngaphansi kwama-intshi angama-15,6, kanye nezincwadi, izingubo nezinye izinto zansuku zonke.
Isikhwama samaphepha esikhwameni samadoda nabesifazane isikhwama samaphepha okufakwayo
Into Cha. ywssd-002 Indwangu ye-Oxford Indwangu yokuvula yokuvula Umsebenzi ongangenisi amanzi, ophefumulayo, ongagqokile, ongazethembi, Ofaka isicelo sobungathathi hlangothi / amadoda nabesifazane Model elula-nxazonke umlomo Isitayela iphedi esikhwameni ithafa Isitayela saseKorea Ubunzima Bokuthwala Izithako ezithambile Ukuphatha izinto ezithambile zemoto I-suture Umbala Olula Isitayela-Round Mouth-Grey, Isitayela Esilula-Round Mouth-Pink, isitayela Esilula-Round Mouth-Blue, Isitayela Esilula Somjikelezo Womnyama-Omnyama 1 ...
Isikhwama semishini ehlombe se-usb esisebenzisana ngezinto eziningi
I-Multifunctional compartment, lesi sikhwama sekhompyutha sifaka amaphakethe amaningi aphezulu angaphakathi namaphakethe aseceleni, anganikeza isikhala esihlukile se-laptop yakho, ifoni ephathekayo, i-iPad, ukhiye, i-wallet, i-binder, izincwadi, izingubo, amabhodlela, njll. Thola kalula lokho okufunayo. Iphakethe langaphambili lingabamba impahla yakho ukuze litholakale kalula.
Ladies wallet ende isigaba esikhulu umthamo ophindwe kabili we-zipper clutch wallet lowesifazane ongumbala we-clutch bag fashion wallet
I-Double-zip esebenzayo enkulu-umthamo we-clutch yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu futhi ezinemvelo ze-PU. I-waterproof, umswakama-ubufakazi, isitayela, ukubukeka okuphelele, imibala eminingi, ihlala isikhathi eside, umuzwa omuhle, ingahlanzwa ngendwangu emanzi.